IKhomishini yokuNcintisana izophenya ngotaku lwabalimi abasafufusa - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
UKUZE iqonde ukuthi kungani abalimi abasafufusa beshaywa indiva yizinkampani ezinkulu, iKhomishini yokuNcintisana isiyethule uphenyo lomphakathi oluzobheka ukuthi kungakanani ukuncintisana emakethe, indlela okuklanywa ngayo amanani emikhiqizo, izingqinamba ezibhekana nabalimi, ikakhulukazi abasafufusa.
Umkhulumeli weKhomishini yokuNcintisana uMnu uSipho Ngwema uthe isimo semakethe nokungena kwabantu abebecindezelekile ngezinye zezinto ezizobhekisiswa. Uthe: “Loko kuzosisiza ukuthi sikwazi ukufukula imboni yezolimo nabalimi abasafufusa.”
Uthi kuzothi kungaqedwa umsebenzi wophenyo lomphakathi bese iKhomishini yokuNcintisana isebenza ukulandela ukuthi konke okudinga ukulungiswa ukuze kufukuleke imboni yezolimo. Uthi: “Ezimweni lapho kudingeka ukuthi sithinte izinhlaka ezithile, sizokwenzenjalo.”
UNgwema uthi ngalesi sithangami esethule ngesonto elidlule bazohlolisisa konke okwenzeka emakethe kubalwa nokuphenya imbangela yokuthwala kanzima kwabalimi abasafufusa, baphinde bagxile ekusebenzeni kwe-value chain, isimo sokutshala kuze kufinyelele ekudayiseni umkhiqizo.
“Loku sikwenza ngenhloso yokuthola ukuthi i-value chain nokuhluka kwamazinga emikhiqizo nendlela efakwa ngayo emakethe kunamphumela muni endleleni esetshenziswa ukuklama amanani ayo,” kuchaza yena.
Uthi bekusemqoka ukuthi baqala lolu phenyo ngenxa yokubaluleka kwemboni yezolimo emnothweni wezwe, ukwakhiwa kwamathuba emisebenzi nokuqinisekisa ukuthi izwe liyasimama.
Umbiko owakhishwa yiKhomishini yokuNcintisana ngonyaka odlule ngamanani okudla okubalulekile waveza ukuthi sasiphezulu futhi likhula izinga lokulawula amanani emikhiqizo yidlanzana embonini yezolimo jikelele.
“Inkinga enkulu edala ukuthi kube nekinga emikhiqizweni yokudla wukuba phezulu kwezinga lokulawula amanini emikhiqizo yidlanzana okudala untswinyo kubalimi abasafufusa, kubakhinyabeze emakethe ngoba babhekana nezindleko ezinkulu,” kusho izethulo zombiko wekhomishini ngonyaka odlule.
UNgwema uthe bathemba ukuthi luningi ulwazi abazoluthola ngalolu phenyo lomphakathi. Uthe uma sebeyiphethile bese bethula izethulo zabakutholile.